Vanhu Vakawanda Votarisana neNzara Inotyisa Munyika
Vazhinji vangotarisira kumasangano anobatsira akaita seWFP nemamwe kuitira kurarama
WASHINGTON DC — Vanhu vanodarika zviuru makumi mana mudunhu reChivi, kuMasvingo, vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa kana vakasawana rubatsiro rwechikafu nekukasika.
Mudzviti wedunhu iri, VaBernard Hadzirabwi, vakaudza bepanhau reThe Herald kuti minamato yavo yangove yekuti sangano rinopa rubatsiro rwechikafu, reWorld Food Program, WFP, rikasike kupindira kuitira kuponesa hupenyu hwevanhu ava.
Studio7 haina kukwanisa kubata VaHadzirabwi kuti tinzwe zvakawanda kwavari padambudziko redunhu ravo.
Rimwe sangano rinopawo rubatsiro richishanda nesangano re WFP, reChristian Care, rinoti harisi dunhu reMasvingo chete rine nzara yapfunya chisero, asi kuti matunhu akawanda emunyika.
Mukuru weChristian Care, Reverend Stansilus Chatikobo, vanoti nekuda kwekushomeka kwechikafu, vakatononoka kutanga chirongwa chekupa rubatsiro kune mamwe matunhu avanoshanda vari anosanganisira gutu kuMasvingo.
NeChipiri vakafanobata chigaro chaPrincipal Director mubazi revashandi nekugara kwakanaka kwevanhu, VaSydney Mhishi, vakaudzawo komiti yeparamende yeMillenium Developments Goals, kuti zvikamu zvingangosvika makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu zviri pasi pehupenyu hunotarisirwa kuraramiwa nemunhu nekuda kwemihoro isingakwane uye kushomeka kwezvekudya.
Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vanonzi vanenge vachida rubatsiro rwechikafu munyika panozopera mwaka wekurima gore rinouya.
Studio 7 yakundikana kubata vebazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.